ဘုရားသခင့် တရားစီရင်ခြင်း - maranathamedia-myanmar.com
တင်ထားသည် မေ 13, 2022 မှ Jutta Deichsel အထဲ၌ ဘုရားသခင်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်
ခရစ်ယာန်အများစု၌ ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်ခြင်း၊ အမျက်ဒေါသ၊ အပြစ်ပေးခြင်း၊ ကလဲ့စားချေ ခြင်းတို့အပေါ် ခိုင်မာသော ယုံကြည်ယူဆချက်များ ရှိကြသည်။ သူတို့အမြင်တွင် ဘုရားသခင်သည် အတိုင်းတာတစ်ခုကျော်လွန်လာပါက စိတ်ရှည် သည်းခံမနေတော့ဘဲ အပြစ်ပေးသူ၊ ပညတ်ချက် လွန်ကျူးသူများကို ကောင်းကင်တမန်များစေလွှတ်၍ ဖျက်ဆီးစေသူ၊ သူကို မယုံကြည်သူများအပေါ် ဖျက်ဆီးလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက် ပြည့်ဝနိုင်ရန် သဘာဝဘေးအန္တရယ်များကို အသုံးပြုကာ လူသားများ ကို နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်သူအဖြစ် ယုံကြည်ကြသည်။ ဘာကြောင့်လူတွေဒီလို ယုံကြည်ကြတာလဲ?
ကားတိုင်ထက်က ခရစ်တော်၏ ပုံပြင်နှင့် ယေရုရှလင်မြို့ပျက်စီးခြင်း ပုံပြင်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်နည်း၊ နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်တွင် ဆိုးသွမ်းသူများအပေါ် ဘုရားသခင် အသုံးပြုမည့် တရားစီရင်နည်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
၁။ သတိပေးသည်။ အမှန်ပြင်ပေးသည်။ ဆုံးမသွန်သင်သည်။ လုံခြုံသောလမ်းကို ညွှန်ပြသည်။
၂။ လူတို့သည် ဝိညာဉ်တော်ကို စွန့်ကာ၊ မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လမ်းစဉ်ကို လိုက်လျောက်ကြသည်။
၃။ အထပ်ထပ်အခါခါ သတိပေးသော်လည်း မိမိတို့လမ်းကိုသာ ရွေးချယ်သည်။
၄။ မိမိကိုမိမိ ဘုရားသခင့်ကွယ်ကာရာ အပြင်ဘက်သို့ ထားကြသည်။
၅။ ဘုရားသခင်က သူ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာများကို ရုတ်သိမ်းလျက်၊ သူ့အကာကွယ်တော်ကို ဖယ်ရှားလိုက်သည်။
၆။ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော် ရုတ်သိမ်းခံကြရသည်။
၇။ စာတန်၏ တိုက်ခိုက်မှုများမှ ကာကွယ်ပေးမည့် ကောင်းကင်တမန်များကို ကာကွယ်ရန် တာဝန်ချပေးထားခြင်းမရှိတော့။
၈။ စာတန်သည် ပင်လယ်၊ မြေပြင်၊ အရပ်ရပ်တွင် ကပ်ဘေးဒုက္ခများ ကျရောက်စေလျှက် လူအ ပေါင်းတို့ကို သူ့သားကောင်များ ဖြစ်လာစေသည်။
ယေရုရှလင်ပျက်စီးခြင်း အဖြစ်ပျက်တွင် အထက်ပါ ဖြစ်စဉ်၊ အချက်လက်များကို မြင်နိုင်ပါသလား။ မဟာတိုက်လှန်ပွဲစာအုပ် ပထမအခန်းရှိ နောက်စာပိုဒ်က ထို မေး ခွန်းကို ဖြေပေးကာ၊ ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ အထက်ပါနည်းမှ သက် ဆိုင်ရာအချက်လက်များ စာပိုဒ်အတွင် ထင်ရှားစေရန် ကွင်းဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။
ယုဒလူတို့သည် မိမိကိုမိမိ ခြေချင်းခတ်လျက်၊ သူတို့ကိုယ်တိုင် ကလဲ့စားချေ ခြင်းခွက်ဖလားကို ပြည့်စေကြသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံး လုံးလုံးပျက်စီးသွားသည်။ အရပ်ရပ်သို့ ပျံ့နှံ့လိုက်လာသော ဘေးဒုက္ခများသည် သူတို့လက်ဖြင့် ကိုယ်တိုင် စိုက်ခဲ့သည့်အတိုင်း ရိတ်သိမ်းရခြင်းဖြစ်သည်။ ပရောဖက်က “အို ဣသရေလ၊ သင့်ကိုကယ်တင်နိုင်သောအရှင် ငါ့ကို သင်သည် ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသောကြောင့် အကျိုးနည်းခြင်းရှိ၏။” “အို ဣသရေလပြည်သားတို့ … သင်တို့သည် သင်တို့၏ အပြစ်ကြောင့် ခြေချော်၍လဲကြပြီ။” (၁, ၂, ၃) ဟောရှေ ၁၃း ၉၊ ၁၄း ၁ သူတို့ခံ စားရသော ဒုက္ခဝေဒနာများသည် ဘုရားသခင်ထံမှ တိုက်ရိုက်ချမှတ်သော အ ပြစ်ဒဏ်အဖြစ် မကြာခဏတွေ့ရသည်။ လိမ်လည်သူသည် သူ့အကြံစည်ကို လျှို့ ဝှက်ထားတတ်၏။ ဘုရား၏ မေတ္တာတော်နှင့် ကရုဏာတော်ကို ခေါင်းမာ မာဖြင့် ငြင်းပယ်ကြသောကြောင့် ယုဒလူများအနေဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ကွယ် ကာမှုကို သူတို့ထံမှ ရုတ်သိမ်းသွားရအောင် လုပ်ခဲ့ကြသည်။ (၄,၅,၆,၇) ထို့ ကြောင့် စာတန်သည် သူတို့ကို စိတ်ကြိုက် အုပ်ချုပ်ခြယ်လှယ်ခွင့်ရရှိသွား၏။ ယေရုရှလင်မြို့ ပျက်စီးခြင်း၌ တွေ့ရသော ကြောက်စရာ အကြင်နာမဲ့ရက်စက် မှုများသည် သူ့လက်အောက်တွင် ကျရောက်သွားသူများ အပေါ် စာတန်၏ အငြိုးကြီးသောအစွမ်းတန်းခိုးကို ထင်ရှားစေသောသက်သေဖြစ်ပါသည်။ (၇, ၈) (GC 35. 3)
ကျွန်ုပ်တို့ ရရှိခံစားရသော ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့် ကွယ်ကာမှုအတွက် ခရစ်တော်၌ ကျွန်ုပ်တို့ မည်မျှအကြွေးတင်နေကြောင်း မသိနိုင်ပါ။ လူသားများကို စာတန်၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်သို့ လုံးလုံးကျရောက်မသွားစေရန် ကာကွယ်ပေးသည့်အ ရာမှာ ဘုရားသခင်၏ ကွယ်ကာပေးသည့် တန်ခိုးတော်ဖြစ်သည်။ (၅, ၆, ၇, ၈) နားမထောင်တတ်သူများနှင့် ကျေးဇူးမသိတတ်သူများအတွက်ပင်လျှင် နတ်ဆိုး ရန်သူ၏ ဘေးအန္တရယ်ပေးမှု၊ အကြင်နာမဲ့ရက်စက်မှုများကို ထိန်းချုပ်ပေး သည့် ဘုရားသခင်၏ စိတ်ရှည်သည်းခံခြင်းနှင့် ကရုဏာတော်အတွက် ကျေးဇူး တင်စရာရှိပါသည်။ (၇, ၈) လူသားများသည် ဘုရားသခင်၏ သည်းခံခြင်းအ တိုင်းတာကို ကျော်လွန်လာသောအခါ ထိုကာကွယ်ခြင်းတန်ခိုးကို ရုတ်သိမ်း လိုက်သည်။ (၅, ၆, ၇) ဘုရားသခင်သည် အပြစ်ကျူးလွန်မှုအတွက် အပြစ် သားကို ပြစ်မှုရာဇသတ်ဖြင့် သေမိန့်ပေးတတ်သူ မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း သူ့ကရုဏာတော်ကို ငြင်းပယ်သူများအား သူတို့စိုက်သည့်အတိုင်း(၂,၃,၄) ရိတ် ရန် စွန့်ထားရပါတော့သည်။ (၅, ၆, ၇) ငြင်းပယ်ခံရသည့် အလင်းတိုင်း၊ အလေးထားမခံရသည့် သတိပေးချက်တိုင်း၊ အလိုလိုက်ခံရသည့် အလိုဆန္ဒ တိုင်း၊ ချိုးဖောက်ခံရသော ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော်တိုင်းသည် မလွဲမသွေ ရိတ်သိမ်းရမည့် မျိုးစေ့များဖြစ်သည်။ (၁, ၂, ၃, ၄) မဆုတ်မနှစ် ခုခံ တွန်းလှန် ပေးသည့် ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်ကို အဆုံးတွင် အပြစ်သားထံမှ ရုတ် သိမ်းလိုက်သည်။ ထို့နောက် ဝိညာဉ်၏ မကောင်းသော အလိုဆန္ဒများကို ထိန်း ချုပ်ပေးမည့် တန်ခိုးမရှိတော့ချေ။ စာတန်၏ ဘေးဒုက္ခရောက်စေလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ရန်လိုစိတ်မှ ကာကွယ်ပေးမည့်အရာ မရှိတော့ချေ။ (၅, ၆, ၇, ၈) ယေရုရှလင်မြို့ပျက်စီးခြင်းသည် ဘုရား၏ကရုဏာတော်ကို ဂရုမထား ဘဲ၊ အကြင်နာတရား၏ တောင်းပန်မှုများကို ငြင်းပယ်ခြင်းအတွက် ကြောက်စ ရာကောင်းသော သတိပေးချက်ပင်ဖြစ်သည်။ (၁, ၂, ၃) အပြစ်သားများထံ ကျ ရောက်မည့် အပြစ်ပေးခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်၏ အပြစ်တရားကို မုန်းတီးခြင်းအ ကြောင်း ထို့ထက် ပိုမိုပြတ်သားသောသက်သေ မရှိဖူးသေးပါ။ (GC 36. 1)